Daawo sida Hargeysa looga xusay maalin aan la isla wada aqoonsaneyn – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa: 18-ka May, waxaa maamulka Somaliland uqoonsanyahay maalin uu ka goostay Soomaaliya inteeda kale, laakiin caalamka iyo Soomaalida kale ayaan wax aqoonsi ah u aheyn.
Sanadkii 1991-kii, markii jabhadda USC ridday dowladdii milateriga aheyd ee Soomaaliya ee uu muddada 21-ka sano ah hogaaminayey Jen. Maxamed Siyaadda Barre, waxaa jabhaddii SNM ee wiqiiyiga Soomaaliya, deegaanada Somaliland uga dhawaaqday iney ka go’day Soomaaliya!
SNM oo aan ku guuleysan iney riddo ama deegaannada ay haataan sheegto ka saarto milaterigii Soomaaliya ayaa ka faa’iideysatay fursada u soo baxday kadib markii Jabhaddii USC ee koonfurta Somaaliya ridday Jen. Siyaad Barre, uuna burburyay milaterigii Soomaaliya.
Sanad kasta, waxaa meelaha maamulka Somaliland maamulo laga xusaa 18-ka May, waxaana laga tegay xuska sanadkii 1960-kii oo aheyd markii Soomaaliya ka xorowday Ingiriiska iyo Taliyaaniga.
Haddaba halkaan ka daawo sawirrada xuska 18-ka May ee sanadkaan 2015, iyadoo ay xusid mudan tahay in dadka ku nool Somaliland ay heystaan nabad oo aysan la mid aheyn koonfurta ama bariga Soomaaliya.
Isha Sawirrada: Rramaasnews